Ahụmịhe Ndị Ahịa - Chain Supply Next
Pooch Enyi na Enyi Akpa, M wee gafee ngwaahịa a enweghị usoro na enweghị m ike inwe obi ụtọ karịa na m mere! ọ bụrụ na m gafee n'oge a, ọ ga-echekwara m ọtụtụ oge. Ha ngwaahịa dị ukwuu, na-enye ahaziri mbupu teepu na igbe na-enyere gị aka iru gị ika, wdg. Ha free atụmatụ na-enye oge mbụ dobe shippers a nnukwu atụmatụ ebe ị nwere ike itinye ngwaahịa 1,000! Oge mbufe na US bụ ihe dị ka ụbọchị 5-9, nke dị oke mma ma e jiri ya tụnyere Aliexpress na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Enwetara m ohere iji nkata ha na-ekwurịta okwu ebe nchegbu ọ bụla m nwere adreesị na emelitere na atụmatụ ha maka ngwa ha yana otu ha si emeziwanye, yana oge mgbe mmelite ha ga-eme. Mgbe gị na onye na-akparịta ụka na-akparịta ụka oge ụfọdụ, ọ na-aza ajụjụ gị ma ọ bụghị ezigbo mmadụ, ha adịghị ka ha na-echekwa ihe niile mana ha na ha na-akparịta ụka, ị nwere ike ịgwa ha na ha na-echebara ndị ahịa ha echiche! Ahapụrụ m nkata m ka nwee obi ụtọ ma nwee mkpali iso ụlọ ahịa m na-aga ma na-achọsi ike ịmepe ya !! Ukwuu nwere ike ikwu!
amourvere Adị m ọhụrụ na mbupu iwu maka ụlọ ahịa m. NextsChain kwụgoro dị ka ọrụ mbupu ngwa ngwa. Ebe ọ bụ na amaghị m ihe m ga-eme, eji m nkata nkata soro otu enyi na enyi nwere nghọta wee kọwaa m ọrụ ahụ. E mesiri m obi ike na mbupu ahụ dị ngwa ma na-elekọta ya. Nextschain enweworị ihe ọmụma banyere ngwaahịa m maka m. Enwere m ekele maka nlebara anya pụrụ iche ha nyere na nkọwa, nke na-azọpụta m oge. Martinez
ThePretty.me Ọrụ Nnukwu Mbupu Ọrụ. Nnọọ mma karịa ngwa niile na ngwa ngwa eji m eji. Daalụ maka ezigbo ọrụ ma na-eme ka nsị na mma.
Ezigbo maka gị Ọfọn ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite ịda mba 2020 a, elela anya na ị nọ n'ọnọdụ ziri ezi, Nextchain nwere nkwado na ngwaọrụ niile maka gị ka ị nwee ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla ndị ahịa ha na-eme bụ ịpị aka ole na ole iji nyere aka. gi ma dozie ma mezie nsogbu gi. Nextchain bụ azụmahịa ahụ.
Mmanya na kọfị hụrụ n'anya M na a na-eji nke a ngwa n'ihi na ọnwa na ọ bụ ugbu a m na-aga ngwa n'ihi na m ụlọ ahịa. Achọtala m ngwaahịa na ebe a enweghị m ike ịchọta na ngwa ndị ọzọ mezuru. Achọghị m iji oberlo ma jiri aliexpress n'ihi na oge mbupu dị egwu na ị ga-emeso otu nde ndị na-ere ahịa dị iche iche. Nextschain na-elekọta ihe niile. Nweta iwu ma kwụọ ụgwọ ahịa ahụ ma ha ngwugwu ma bupu ngwaahịa a ma zipụ ozi nkwenye ụgbọ mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu ọ bụla ha ga-alaghachikwute gị ma mezie ya. N'uche nke m, nke a bụ ngwa kachasị mma maka ndị na-agbawa mmiri.
OM Ejiji Boutique Obi dị m ezigbo ụtọ na Nextschain.
ọtụtụ ngwaahịa ịhọrọ site na nnukwu ọrụ ejiji.
Enwere m nsogbu ma ha nyere m aka ozugbo wee dozie m.
daalụ nke ukwuu NextsChain.
Acoti 1 Enweela m ngwa a ma ọ dịkarịa ala ọnwa 2 tupu ịde nyocha a. Ọtụtụ nyocha e nyere na ụbọchị 1 nke iji. Nke a bụ ezigbo ngwa. Emechara m usoro nlele nke ezigara na oge dị ka ekwuru. Ebubatala m ma ọ dịkarịa ala ngwaahịa 150 na ihe ịga nke ọma. M kpọtụụrụ support dịkarịa ala 5 ugboro na a nnọọ n'oge omume ọ bụla. Aga m akwado onye a na ngwa a. Daalụ nke ukwuu NextsChain!
m na-agbakwunye na nyocha a. Achọrọ m ka onye ọ bụla mara ezigbo ahụmịhe m na Nextschain. Akpa oyi abụghị m nnukwu ụlọ ahịa oge Mana! Enwebeghị m nsogbu ịhazi iwu m na Nextschain. Ikwesiri iguta usoro ojiji ya ma mata ma ị jiri Aliexpress maka ọrụ gị ọ na-ewe ogologo oge maka mbupu! Y’oburu na ichoro mbufe NANI Jiri NextsChain maka mmezu. Enwetụbeghị m nsogbu ịhazi iwu m. Ma nke kachasị bụ na !!! Enwere m onye ahịa ka o nye iwu na Disemba 12. Sojọ jidere m nke ukwuu banyere ya. WOW ọ bịara na onye ahịa na ụbọchị 11 site na itinye iwu. Ọ bụ oge ahụ maka oge ekeresimesi na onye ahịa ya na enwere m obi anụrị. Daalụ nke ukwuu NextsChain. Ọrụ ndị ahịa dị mma! 10 kpakpando.
Ndị agha Apple Watch Bands Ahọrọ m ngwa a n'ihi na achọrọ m ịnye ndị ahịa ngwa ngwa na UK (na nke nwere ike zuru ụwa ọnụ, n'ikpeazụ) dịka oge mbupu ụbọchị 20-40 site na ndị na-eweta ngwaahịa ndị ọzọ buru oke ibu. Enwere m ụdị ngwaahịa ụfọdụ, yabụ enwere m ụjọ na nhọrọ m ga-ejedebe, mana enwere ibu. Enwere m ihe karịrị ngwaahịa 160 na-eche ibubata, ha niile dị oke mma. Aha ngwaahịa dị mma ma dozie, ọnụahịa nwere ezi uche maka ịda mba wdg. Enwebeghị m ike ịnweta usoro site na ha (amalitere m na mmalite) yabụ ejighị m n'aka etu esi arụ ọrụ maka ndị ahịa ahụ, mana usoro ahụ na ahụmahụ ruo ugbu a dị ukwuu.
Ọrụ ndị ahịa bụkwa ihe pụrụ iche. Ha dị ezigbo mma ma na-enye aka, ma wepụta oge iji gwa gị okwu ma zaa ajụjụ gị. Super anabata. Enwere m mmasị n'ezie ruo ugbu a!
Ugboro abụọ Ngwa a bụ egwuregwu na-agbanwe nnukwu ngwaahịa nnukwu oge mbupu na nnukwu ọnụ ụlọ iji nweta uru ndị na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa kachasị mma m rụtụrụla m gbabara n'okwu ma dozie ya n'ime oge kwesịrị ekwesị n'otu ụbọchị. Ngwa dị mma. Imirikiti ihe bụ mbupu n'efu